I-Friesland, ulimi lwayo kanye nesiko esasetshenziswa ukuba yisiqhingi ngaphansi kwe-Iceland esibizwa ngokuthi iFrisland?
ahanjiswe UMLANDO	by UMartin Vrijland	ngo-7 January 2017	• 7 Amazwana
Yeka indlela umlando osheshayo ongathembeka ngayo kubonakala sengathi ukhonjiswe ngokutholakala kwesiqhingi saseFrisland kumabalazwe amadala avele avela emitatsheni yama-international. Wake wake wazibuza ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi kunabantu abancane abanenkani abahlala enyakatho yeNetherlands abakhuluma ulimi [...]
ahanjiswe UMLANDO	by UMartin Vrijland	ku-18 May 2016	• 33 Amazwana
Eziqephu zami zokugcina ngizikhulume kaningi, okungukuthi izwe lisasetshenziswa yi-agear yegazi elidala. Mhlawumbe uzocabanga ukuthi "Awu, wenza kanjani umuntu wakho omatasa!", Kodwa kubalulekile ukutadisha, ngoba ngaleso sikhathi uzoqonda ukuthi umlando, okwamanje kanye nekusasa [...]
I-Brexit ayiyimbi ngenhliziyo yezezimali yaseBrithani
ahanjiswe UMLANDO	by UMartin Vrijland	ku-14 May 2016	• 3 Amazwana
Izolo sibonile ezindabeni ze-NOS ukuthi i-Brexit (leyo ephuma eYurophu yiBrithani) ingaba nomphumela omkhulu wezezimali ngenhliziyo yezezimali yaseLondon. Kodwa-ke, lokho kuyisiqalo esiphelele uma singathí sina ngokumba ukuphenya ukuthi yilokho ngempela inhliziyo yezimali yaseLondon. Lokhu [...]
Impi eSiriya kanye nempi yezwe ezayo noma 'ehluma'
ahanjiswe UMLANDO	by UMartin Vrijland	ku-10 May 2016
UMongameli waseRussia uVladimir Putin ubize izolo ngokusungulwa kwenhlangano yomhlaba wonke yokuvikela ukulwa nobuphekula. Umbuzo wukuthi singaphetha ngokuthi lokhu u-Putin (noma u-Putin, uma uthanda) empeleni usekela i-globalist agenda ye-New World Order. Ukuze uphendule lo mbuzo kungenzeka ukuthi [...]
Ukugubha Usuku Lokukhulula? Uyazi ukuthi ujabulani?
ahanjiswe UMLANDO	by UMartin Vrijland	ku-5 May 2016	• 0 Amazwana
Uma uzogubha uSuku Lokukhulula namhlanje futhi ucabanga ukuthi uguqula inkululeko yaseNetherlands kumaNazi, bese uthatha isikhashana ukutadisha ukuthi ngabe kunjalo ngempela yini. Kuwebhusayithi ye-Truthseeker1313.com umbono ohlukile ngokuphelele womlando ungatholakala kune- [...]
UMartin Vrijland uxoxisana noSean Hross ngokuthi abalingiswa bamaPharaonic balawula kanjani umhlaba
ahanjiswe UMLANDO	by UMartin Vrijland	ngo-31 March 2016	• 18 Amazwana
Kuxoxwa ngazo ngokuxoxwa kukaMartin Vrijland noSean Hross ngo-31 March 2016. USean Hross uyisazi-mlando futhi ekuqaleni kwaseNingizimu Afrika. Ngaphambi kwalokho ngambuza naye 25 May 2015. Ukwaziswa kukaSean kubalulekile ekuqondeni konke esikwenzayo namhlanje [...]
Kungani i-Europe yenza sengathi i-Erdogan ayinandaba kodwa isebenza ngokuyimfihlo neHitler entsha
ahanjiswe UMLANDO	by UMartin Vrijland	ngo-11 March 2016	• 4 Amazwana
Ngaphambi kweMpi Yezwe Yesibili sabona imvuselelo enkulu emnothweni waseJalimane. U-Adolf Hitler wakha izimboni eziphelele futhi ingqalasizinda yayithuthukisiwe kakhulu. Lokhu kwabangela ukuguqulwa kwezomnotho okukhulu eGermany, okwaze kwaze kwaba yilapho ihlupheka kakhulu ekukhokhweni kokubuyiswa ngemuva kweMpi Yezwe Yokuqala. Ukuvuselelwa komnotho mhlawumbe kwenza u-Adolf Hitler [...]
Ingabe uJesu wayengumzukulu kaFaro; Ingabe imindeni yasebukhosini inzalo kaFaro?
ahanjiswe UMLANDO	by UMartin Vrijland	ngo-11 March 2016	• 6 Amazwana
Ingabe umlando njengoba siwazi kahle? Ingabe izinkolo njengoba sizazi izibonakaliso ezilungile zomsuka wazo? Kungani iNdlovukazi uElizabeth II yaseBrithani yayigqoke esihlalweni sobukhosi esiphezu kwetshe likaJakobe futhi phezu kwesiteji sepiramidi? Ngaphambi kokuba ngiqede ukuhlaziywa [...]
ahanjiswe UMLANDO	by UMartin Vrijland	ngo-10 March 2016	• 6 Amazwana
"I-Order of Merit ye-Federal Republic of Germany" (isiJalimane: i-Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland) yiyona kuphela yokufaneleka kweJalimane futhi yasungulwa nguMongameli we-Federal Theodor Heuss ngo-7 September 1951. Kukhona into ehlabayo mayelana nalesi siphambano. Yanikezwa abantu abavelele baseDutch. Uhlu nje: Indlovukazi uJuliana noPrince Bernhard, iNdlovukazi Beatrix kanye [...]
Isimo sempi eSiriya; uMbuso WaseMpumalanga WaseRoma, iByzantium noMbuso Wase-Ottoman
ahanjiswe UMLANDO	by UMartin Vrijland	ngo-7 March 2016	• 0 Amazwana
Ukuze uqonde ukuvela Turkey eholwa nguMengameli Recep Tayyip Erdogan kubalulekile ukuhlola nengxenye ethile yomlando. Uma sazi lo mlando, sizophinde siqonde ukuthi impi yamanje ihlala kanjani eSiriya ingachazwa; yiziphi amaqembu akhuthele futhi 'ngubani' noma 'yikuphi' okwangempela [...]
Ukuvakasha okuphelele: 2.503.725